သူက "ငါ့ကိုစောင့်ပါ" ၌သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်ကိုတွေ့မြင်ဖို့ကိုဘယ်လို - မေးခွန်းနှင့်အဖြေ - 2019
သူက "ငါ့ကိုစောင့်ပါ" ၌သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်ကိုတွေ့မြင်ဖို့ကိုဘယ်လို
ကောင်းသောမိတ်ဆွေများ, သူငယ်ချင်းများ, ဆွေမျိုးသားချင်းများ: အထံတော်သို့နီးကပ်လူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်မှု၏အရှုံး - ကံမကောင်းစွာပဲနီးပါးတိုင်းလူတစ်ဦးတဦးတည်းပြဿနာအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလက်ျာလူတစ်ဦးကိုရှာဖွေသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၏အသက်, ဒါကြောင့်လွယ်ကူသည်မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း ...
(တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်လည်းလမ်းဖြင့်, သင်သည်အလွန်ရှာဖွေကြသည်သူတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်သည့်, အ eponymous ဂီယာ,) "ငါ့ကိုစောင့်ပါ" - ရုရှားအမျိုးသားရေးဝန်ဆောင်မှုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရှာဖွေရေးလူတွေ၌ထငျရှားအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
မ airtime အလုံအလောက်ရုံမဖြစ်နိုင်မဟုတ်ပါဘူး - ဒါဟာတီဗီလူတိုင်းအပေါ်ပြပွဲစေချင်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ! ဤဆောင်းပါးလိမ့်မည်ကားအဘယ်သို့သောကွောငျ့သငျသညျစိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ရှိရာ site တစ်ခုရှိသည်အဘယ်ကြောင့်, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်အားဖြင့်အဆင့်: ဘယ်လို "ငါ့ကိုစောင့်ပါ" ၌သင်တို့အဘို့အရှာနေသူကိုမြင်ရဖို့
1) ပထမဦးစွာဝက်ဘ်ဆိုက်၏ address bar မှာရိုက်ထည့်လိပ်စာ "ငါ့ကိုစောင့်ပါ" (//poisk.vid.ru/) ဒါမှမဟုတ်နာမည်တူ link ကိုသွား (ရုံခေါင်းစဉ်အထက်။ ကြည့်ပါ) ။
2) ညာဘက်မျက်နှာပြင်ရဲ့အလယ်ဗဟိုတွင် (ရှာဖွေရေး string ကို၏တည်နေရာ) ကို browser ကိုပေါ် မူတည်. အနည်းငယ်ကွဲပြားစေခြင်းငှါ - ပုံစံကိုရှာပါလိမ့်မယ်။ ပုံစံ၌သင်တို့ကို "ကိုရှာဖွေ" ကိုနှိပ်ပြီးတော့, (ဤအမှု၌, သင့်အမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော) ကိုတပ်မက်လိုချင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးအမည်ဂိုးသွင်းဖို့လိုအပ် (။ ပုံကိုကြည့်ပါ။ 1) ။
သင်္ဘောသဖန်း။ ငါ့အဘို့ 1. စောင့် - အမျိုးသားဝန်ဆောင်မှုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရှာဖွေရေးကလူ
3) အကယ်. သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြလူဖြစ်ကြလိမ့်မည် - သင်ရှာဖွေနေကြပါသည်သောသူအပေါင်းတို့၏စာရင်းကိုမြင်လိမ့်မည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူတို့နှင့်သင်တို့တွင်အ ... စကားမစပ်နာမတော်နှင့်နာမတော်ကိုအပြင်လူတစ်ဦး၏မွေးဖွားပါကရှာဖွေနေသည်သူ၏စာသား၏နေ့စွဲအဖြစ်ပြသပါလိမ့်မယ်။
တချို့က profile များကိုနေဆဲတည်းဖြတ်စေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုများ၏ဖော်ပြချက်ပျက်ကွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 2. ပြည်သူ့ Wanted
4) အမညျနှငျ့အအလိုရှိသောသူတစ်ဦး၏အမည်စသည်တို့ကို, (ရော့, Ivanov နှင့် Sidorov အလွန်ဘုံသည်ဆိုပါက) - ကရှာဖွေရေးလိုလူမျိုး၏ကြီးမားသောဒေတာဘေ့စပေးမည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရှာဖွေရေးစံမွမ်းမံဖို့, သင်ဆိုဒ် (ဘယ်ဖက် sidebar) ၏လက်ဝဲကော်လံမှရှာဖွေရေးပုံစံကိုသုံးနိုင်သည်:
- မွေးဖွား၏နေ့စွဲ (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးခန့်မှန်းခြေ, အကွာအဝေး) ညွှန်ပြ;
- (ပုံ3ကိုကြည့်ပါ .. ) sorting အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 3. ရှာရန် Options ကို
5) စကားမစပ်ကျနော်အနည်းငယ်အကြံဉာဏ်ကိုငါပေးမည်။ ပထမနှင့်နောက်ဆုံးအမည်နှစ်မျိုးလုံးကြီးများနှင့်သေးငယ်တဲ့စာလုံးနိုင်ပါတယ်ရေးရန် - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ထိခိုက်မခံတဲ့ Case မပေးပါ။ သို့သော်ဘာသာစကား၏ရွေးချယ်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်! လက်တင်အက္ခရာ၌သူ၏နာမအဘို့ရှာဖွေရေးအတွက်ဂိုးသွင်းရန်ကြိုးစား (တစ်ခါတစ်ရံကူညီပေးသည်) - သင်ကမတှေ့ဘူးဆိုရငျဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံး, ထို့နောက်ရုရှားညာဘက်လူတစ်ဦးကိုကြည့်နှင့်။
ရုံငါ add ချင်တယ်။ သငျသညျတစုံတယောက်သောသူသည်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင် - သငျ "ငါ့ကိုစောင့်ပါ။ " သင်၏အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာပုံစံကိုစွန့်ခွာနိုင်ပါတယ် ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင် site ပေါ်တွင် register ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ပြီးတော့ apply: ပိုမိုတိကျသောနှင့်ပိုပြီးအလိုရှိသောသူတစ်ဦးများအတွက်ဒေတာပေး, အောင်မြင်မှု၏အခွင့်အလမ်းတွေကို သာ. (ပုံ4ကိုကြည့်ပါ .. ) ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 4. ခွင့်လျှောက်လွှာ
ဤဆောင်းပါး၌အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစဉ်အဆက်မည်သူမဆို, အဘယ်သူမျှမများနှင့်ဆုံးရှုံးဖို့ဘာမျှဝမ်းသာပါတယ်ပါလိမ့်မယ် ...
ဗီဒီယို Watch: Rose Quartz အဖမ စတကကတတတ သက ဘယသဖစမလ? (အောက်တိုဘာလ 2019).